हार नमान्नुहोस्​—⁠मदत पाउन सक्नुहुन्छ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
मदत पाउन सक्नुहुन्छ
“त्यतिन्जेल तिमीहरूले आफ्नो सारा फिक्री उहाँमाथि बिसाओ, किनकि उहाँले तिमीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ।”—१ पत्रुस ५:७.
तपाईंको परिस्थितिमा सुधार आउने कुनै छाँटकाँट नै देखिंदैन भने तपाईंलाई सायद मर्नु नै बेस हो जस्तो लाग्ला। तर तपाईंले मदत पाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो मदत?
प्रार्थना। प्रार्थना भनेको केवल आफ्नो मनलाई सन्चो बनाउने माध्यम होइन न त समस्याले व्याकुल हुँदा मात्र गरिने बिन्ती हो। प्रार्थना भनेको त हाम्रो ख्याल राख्ने परमेश्वर यहोवासित गरिने वास्तविक कुराकानी हो। तपाईंले आफ्नो मनको व्यथा यहोवा परमेश्वरलाई पोखेको उहाँ चाहनुहुन्छ। बाइबलले यसो गर्न आग्रह गर्छ: “तेरो भारी परमप्रभुमा राख्, र उहाँले तँलाई सम्हाल्नुहुनेछ।”—भजन ५५:२२.
आजै परमेश्वरसित प्रार्थनामा आफ्नो मनको कुरा पोखे कसो होला? प्रार्थनामा यहोवा परमेश्वरको नाम प्रयोग गर्नुहोस् र मनैदेखि उहाँसित कुराकानी गर्नुहोस्। (भजन ६२:८) तपाईंले उहाँलाई साथी बनाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। (यशैया ५५:६; याकूब २:२३) तपाईं जुनसुकै बेला जहाँ भए पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ।
अमेरिकी आत्महत्या रोकथाम संस्थाका अनुसार, “आत्महत्या गरेर मर्नेहरू मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा धेरै मानिसलाई मानसिक रोग लागेको थियो भनेर अध्ययनहरूले देखाएका छन्‌। तर धेरैजसो अवस्थामा या त रोग खुट्‌याउन सकिएको थिएन या सही उपचार गरिएको थिएन।”
तपाईंको ख्याल राख्ने व्यक्तिहरू। तपाईंको जीवन अरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको परिवारका सदस्य र साथीहरूलाई पक्कै पनि तपाईंको चिन्ता लाग्छ। तपाईंले पहिला कहिल्यै नभेटेका व्यक्तिहरू पनि तपाईंको ख्याल राख्छन्‌। जस्तै, यहोवाका साक्षीहरू। प्रचार गर्दै जाँदा तिनीहरूले चिन्ताले ग्रसित थुप्रै मानिस भेटेका छन्‌। तीमध्ये केहीले त कतैबाट मदत नपाएकोले आत्महत्या गर्ने सोचाइ समेत राखेका थिए। यहोवाका साक्षीहरूले घर-घरको प्रचारमा जाँदा निराश व्यक्तिहरूलाई मदत गर्ने राम्रो मौका पाएका छन्‌। येशूले जस्तै यहोवाका साक्षीहरू अरू मानिसहरूको ख्याल राख्छन्‌। तपाईंको पनि ख्याल राख्छन्‌।—यूहन्ना १३:३५.
विशेषज्ञ। आत्महत्याको सोचाइ आउनु प्राय: डिप्रेसनको लक्षण हो। शरीरमा कुनै रोग लाग्दा तपाईं लाज मान्नु हुन्न; त्यसैगरि डिप्रेसन जस्ता भावनात्मक रोग लाग्दा पनि अप्ठ्‌यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। डिप्रेसनलाई “दिमागमा लाग्ने रुघाखोकी” समेत भनिन्छ। यो जसलाई पनि लाग्न सक्छ अनि यसको उपचार छ। *
यो कुरा मनमा राख्नुहोस्: डिप्रेसन एउटा गहिरो खाडल जस्तै हो। तपाईं आफ्नै भरमा त्यस खाडलबाट निस्कन सक्नुहुन्न। तर कसैको मदत लिनुभयो भने तपाईं सफल हुनुहुनेछ।
आज यसो गर्नुहोस्: डिप्रेसन जस्ता भावनात्मक रोगहरूको उपचार गर्ने राम्रो डाक्टर खोज्नुहोस्।
^ अनु. 8 आत्महत्या गर्ने सोचाइ तीव्र छ भने कस्ता मदतहरू उपलब्ध छन्‌, पत्ता लगाउनुहोस्। जस्तै आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन वा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तपाईंले तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूबाट मदत पाउन सक्नुहुन्छ।